सरकारको सहुलियत पसल: न रोजेको सामान, नत भारी छुट नै ! - समसामायिक | Kantipur TV HD
सरकारको सहुलियत पसल: न रोजेको सामान, नत भारी छुट नै !
चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा सामान दिने र बजारमा हुनसक्ने मनपरि मुल्यवृद्धि रोक्न सघाउने लक्ष्य सहित सरकारले यसबर्ष पनि एकिकृत सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दूग्ध विकास संस्थान मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका यस्ता सहुलियत पसलमा उपभोक्ताको भने खासै चासो देखिन्न। किनभने न उपभोक्ताले रोजेका सामान पाउँछन, नत भारी छुट नै हुन्छ ।
काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका ७३ स्थानमा सोमबारदेखि यी पसल सञ्चालनमा आए पनि उपभोक्तालाइ हर्ष न विष्मात भएको छ । कार्यालय समयमा मात्र खुल्ने, सीमित सामान पाइने र महँगो भाडा तिरेर किन्न जानुपर्ने भएकाले पनि सहुलियत पसलमा अाकर्षण छैन ।
कात्तिक १७ गतेसम्म सञ्चालनमा रहने सहुलियत पसलका लागी सरकारले यसबर्ष ३ करोड २५ लाख रुपैँया छुट्याएको छ । तर यस्ता सहुलियत कर्मकाण्ड मात्रै भैरहेको छ ।
चाडपर्वको समय उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी किनमेल गर्ने बेला हो । त्यसैले सहुलियत पसलको अवधारण सहज,सस्तो र बजार हस्तक्षेपका लागि पनि हो । त्यसैले लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने गरि काम नहुने हो भने यस्ता सहुलियत पसल संचालन हुनु र नहुनुले खासै अर्थ राख्दैन् ।
आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेमाथि सजायको व्यवस्था भएपछि धमाधम मुद्दा
संसदीय समितिमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकार हावी
Pradesh Bishesh | प्रदेश विशेष, ०६ माघ २०७६
सरकार गुप्तचरी संयन्त्रको पुनर्संरचनाको तयारीमा